လူ့ခန္ဓာကိုယ်အံ့ဘွယ်သောအဖြစ်ပါသည် - ပေမယ့်တစ်ဦးတစ်သက်တာအာမခံချက်မရှိပါဘူး - သတင်း Rule
လူ့ခန္ဓာကိုယ်အံ့ဘွယ်သောအဖြစ်ပါသည် - ပေမယ့်တစ်ဦးတစ်သက်တာအာမခံချက်မရှိပါဘူး
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “လူ့ခန္ဓာကိုယ်အံ့ဘွယ်သောအဖြစ်ပါသည် - ပေမယ့်တစ်ဦးတစ်သက်တာအာမခံချက်မရှိပါဘူး” အဲလစ်ရောဘတ်ကရေးသားခဲ့သည်, တနင်္ဂနွေ 31 ရက်နေ့မှာအဆိုပါ Observer မေလများအတွက် 2015 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဲလစ်ရောဘတ်ရဲ့ကျောရိုးရှိသတ္တဝါကော်​​လံ scan က, အ Schmorls node ကိုဖြင့်နှင့် disc ကိုချော်. ဓါတ်ပုံ: ဘော့ကနျြးမာရေး
သင့်ခန္ဓာကိုယ်စုံလင်သောဝေးဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအီဗိုလူးရှင်း၏နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ၏ထုတ်ကုန်င်, ဒါပေမဲ့ဒီ process ကို "စုံလင်ခြင်း" ဆီသို့ဦးတည်ကြိုးစားကြသည်မပါဘူး. တကယ်တော့, ဒါကြောင့်ဘာမှမဆီသို့ဦးတည်ကြိုးစားကြသည်မပါဘူး. ဒါဟာကိုယ့်ဖြစ်ပျက်: တစ်မျိုးစိတ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအကြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ကွောငျ့,, နှင့်အချို့သောအခြားသူများထက်နျြနှင့် reproducing ၏ပိုကောင်းခွင့်အလမ်းတွေကိုများ. စိတျထဲမှာတစ်ဦးရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှဖွင့်. ကိစ္စရပ်များရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်မျိုးပွားမြားအခွင့်အလမ်းတွေကိုကြောင်းအားလုံး: ဂိမ်းယခုအချိန်တွင်ထွက်ကစား, သက်ရှိနှင့်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အကြား.
လူ့ခန္ဓာဗေဒမှာအသေးစိတ်ရှာဖွေနေ, အစဉ်မပြတ်ငါနှစ်ဦးလက်တွေ့ကျကျဖျက်သိမ်းအကြံအစည်နှင့်အတူကျန်ရစ်တယ်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်, အနုစိတ်လက်ရာ; ပြီးတော့ - သူတို့-အတူတူ cobbled နေကြတယ်, အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်း-အိတ်, တစ်ခါတစ်ရံ clunking စက်တွေ. အများကြီးပိုကောင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ခန္ဓာဗေဒ၏ဤမျှလောက်များစွာသော-bits ရှိပါတယ်. ငါလူသားတစ်ဦးအသိဉာဏ်ဒီဇိုင်နာကြီးဘူးဆိုရင်, ငါအာရုံကြောမျက်စိ၏နောက်ကျောထားခဲ့ရှိရာမျက်စိကန်းသောအစက်အပြောက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ပတ်လည်မြင်လွှာကိုပြောင်းချင်ပါတယ်; ငါနောက်ကျောစိတျနှလုံးအဖို့ထိုအသွေးကိုကူညီခြင်းနှင့်နက်ရ​​ှိုင်းသောသွေးပြန်ကြော thrombosis ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချဖို့ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောထဲမှာအနည်းငယ်စုပ်စက်တင်ချင်ပါတယ်; ငါနှစ်ဦးသွေးကြောဆိုင်ရာသွေးလွှတ်ကြောအကြားတစ်ဦးကယ့်ကိုကောင်းသော link ကိုအတွက်ကပ်ချင်ပါတယ်, တဦးတည်းပိတ်ဆို့ဖြစ်လာခဲ့သည်လျှင်နိုင်အောင်, သည်အခြားအလွယ်တကူကျော်ယူနိုင်; ငါနောက်ကျောပြဿနာများ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချရန်ကျောရိုးထွက် sort ချင်ပါတယ်. ဤသူတချို့က niggling ပြဿနာတွေရှိပါတယ်, အချို့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်. သို့သော်သူတို့သည်အလွန်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်မျိုးပွားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေး '' အခွင့်အလမ်းတွေကိုထိခိုက်ပြီမထင်ကြဘူး, ဒါကြောင့်သဘာဝအရွေးချယ်ရေးသူတို့ကို "သတိထားမိ" မထားပါဘူး - ကျွန်တော်သူတို့နှင့်အတူကပ်နေ.
ကျောရိုးကဤသိမှုဆိုင်ရာအာရုံသွေးခွဲခွကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှာများစွာသောဥပမာဖြစ်ပါတယ်: ဒါကြောင့်အင်ဂျင်နီယာပါရမီတစ်ကုအပိုင်းအစတူ, ဒါပေမယ့်နီးပါးကျရှုံးဖို့ဒီဇိုင်းပုံ. အနည်းဆုံး, ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူကျရှုံးဖို့ဒီဇိုင်းခံရဖို့ပုံရသည်; က built-in obsolescence နှင့်အတူကြွလာ.
အဆိုပါကျောရိုးရှိသတ္တဝါကော်​​လံ၏ဖွင့်ထား 33 အရိုး. အဆိုပါအနိမ့်သူတွေကို fused နေကြတယ်: အ sacrum ဖွဲ့စည်းရန်ငါး, နှင့် coccyx အဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်လေး. အဆိုပါ 24 အ sacrum အထက်အရိုးသီးခြားယူနစ်များမှာ. တစ်ခုချင်းစီကိုချပေးသည်၎င်း၏အိမ်နီးချင်းများမှီဝဲသော, အထက်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, နောက်ကျောဆီသို့ဦးတည်သေးငယ်တဲ့ synovial အဆစ်များက. ဤရွေ့ကားအရိုးအသီးအသီးစုံတွဲများအကြားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအချို့သောဒီဂရီခွင့်ပြု. အ intervertebral disc တွေကို - - ထိုအရိုး၏အလောင်းများကိုအကြားဒါပေမဲ့ကျောရိုး၏အဓိကအလေးချိန်-bearing အဆစ်အရိုးနု၏ခေါင်းအုံးများမှာ. ဤရွေ့ကား discs တွေကိုတစ်ဦး fibrous ပြင်လက်စွပ်ထားရှိရေး, အရာကိုယ်တိုင်က annular အလွှာပါဝင်ပါသည်, တစ်ဦးကြက်သွန်တူ. disc ကို၏ဗဟိုကွဲပြားခြားနားသည်: လိမ်းဆေးကဲ့သို့, သွားတိုက်ဆေးများ၏ကိုက်ညီမှုတူတစ်ခုခု - က fibrous ပြင်လက်စွပ်အားဖြင့်အရပျ၌ကငျြးပ. အဆိုပါလိမ်းဆေးအဆနျ့ကငျြအရိုးများ၏မျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်ပြီးဝန်ကိုပျံ့နှံ့စေရန်ကူညီပေးသည်. အနည်းဆုံး, ကမည်ကဲ့သို့လူငယ်တစ်ဦး disc ကိုအကျင့်ကိုကျင့်င်.
သင်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ, သင့်ရဲ့ discs တွေကိုသင်နှင့်အတူအဟောင်းတွေရ. နှင့်, မျှမျှတတမလွှဲမရှောင်, သူတို့သမ္မတကတော်ရန်စတင်. အဆိုပါနျူကလိယကိုထုတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်အစားဒါကြောင့်အညီအမျှဝန်ပျံ့နှံ့, ဖိအားထိပ်အ disc ကိုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြု. မိနစ်ကျိုးအအရိုး၏မျက်နှာပြင်တွင်ပေါ်လာနိုင်, နောက်ဆုံးမှာတော့သေးငယ်တဲ့တွင်းမှဦးဆောင်, အနျူကလိယကိုချပေးကိုယ်တိုင်ကသို့တက်တွန်းအားပေးနှင့်အတူ. ဤရွေ့ကားတွင်း Schmorl ရဲ့ node များဟုခေါ်ကြသည်. ပြင် fibrous လက်စွပ်အတွက်ဒါကိုတော့အတွင်းနျူကလိယအားဖြင့် herniate ခွင့်ပြု, အများအားတစ်ဦး "ချော် disc ကို" အဖြစ်လူသိများဘာဖန်တီးခြင်း. ထိုကဲ့သို့သော protrusions ကျောရိုးအာရုံကြောပေါ်နှိပ်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီအနာကျင်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး.
ငါရှေးဟောင်းသုတေသနလူ့အကြွင်းအကျန်မှာရှာဖွေနေတာပါသောအခါ,, ငါဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာရောဂါဒီအမျိုးအစားအချို့အရိပ်လက္ခဏာကိုတက်ခူးနိုင်. တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးချော် disc ကိုမှခံစားခဲ့ရလျှင်ငါသိဘယ်တော့မှ - သောသူအပေါင်းတို့သည်အပျော့တစ်သျှူးရဲ့. သို့သော်လည်းငါသည်ဆစ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးဖို့စတင်နေကြသည်ဘယ်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်, တစ်ဦးပျက်ကွက်ပူးတွဲတည်ငြိမ်ရန်အတွက်ဆိုပါကအဖြစ် - "မဖြစ်စလောက် osteophyte" - နှင့်အပိုအရိုးအချပေး၏အနားပတ်လည်မှာတည်ဆောက်. ထိုအခါငါဆက်ဆက် Schmorl ရဲ့ node များဖွင့်ကောက်နိုင်, အရိုး၏အဆုံး-ပြားသို့ရှုပ်နေခဲ့သည်. ဤရွေ့ကားအဟောင်းတွေအရိုးစုအတွက်အတော်လေးဘုံကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဖြစ်ကြသည်.
ရက်သတ္တပတ်တစ်စုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့, ငါရှေ့တော်၌ပြုသောအမှုဘယ်တော့မှင့်တစ်လမ်းအတွက်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ကျောရိုးမှာကွညျ့ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်. အစောပိုင်းတယောက်စနေနေ့နံနက်, ငါ Cheltenham မှခေါင်းနှစ်လုံး, အဘော့ Imaging Centre ကိုမှ, သူတို့ရဲ့နှင့်အတူပူပြင်းတဲ့နေ့စွဲတွေအတွက် 1.5 တက်စလာ MRI စကင်နာ. ငါနီးပါးအပြည့်အဝကိုယ်ခန္ဓာ scan ကပမာဏအဘယျသို့ရှိသွားခဲ့ - ကိုငါ့လည်ပင်းမှငါ့ထွင်ထားတဲမှ, ငါ့ဦးခေါင်းထွက်ပျောက်ဆုံး, လက်နက်နှင့်ခြေထောက်များ. ငါ၏အခန္ဓာဗေဒ - - ဤခန္ဓာဗေဒအကြောင်းဆွေးနွေးချက်အားလုံးကိုခဲ့ဘို့ Cheltenham သိပ္ပံပညာပွဲတော်, အပေါ်5ဇွန်လ.
ငါသည်ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအပြင်ကြည့်ရှုရန်ဤအခ​​ွင့်အလမ်းရဖို့ကယ့်ကိုစိတ်ဝင်တစားလေ့လာခဲ့ - ခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကိုယ်အလိုအလျောက် bits သည်ကြည့်ရှုခြင်းငှါ. ထိုအသေး, ငါကစနေနေ့ Cheltenham မှတက်မောင်းအဖြစ်, ငါ trepidation အတူလွန်ကဲကဲအစွမ်းထက်သံလိုက်စက်နဲ့ငါ့ခန့်အပ်ချဉ်းကပ်. ဘော့မှာလူလက်ျာငါ့ကိုအမှီမြင်သွားခဲ့ကြသည် - သူတို့ဘာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်? တစ်ဦးအတွက် မကြာသေးမီကလေ့လာချက် ၏ 666 ပုံကျန်းမာတဲ့လူ, 659 အချို့အလွန်သေးအဖှဲ - ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုဖွစျပှားတွေ့ရှိချက်အချို့ကိုကြင်နာခဲ့, အလွန်လေးနက်သောအခြားသူများကို.
ငါဖွင့်တဖက်သတ်ကင်နာ၌အိပ်, ငါ့ကိုပတ်လည်စက်၏ clanking နားထောင်ခြင်း, ထိုသို့မြင်လျှင်ခဲ့ရာအံ့သြ. ငါ၏အနိမ့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ Scan ဖတ်မယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာယူပုံ. နောက်ဆုံးမှာ, နှစျနာရီခနျ့ပြီးနောက်, ငါသည်ငါ့ Scan ဖတ်ကြည့်ဖို့ရေဒီယိုရောင်ခြည်အထူးကု Iain Lyburn နှင့်အတူတက်တွေ့ဆုံခဲ့. အမှားတစ်ခုခုရှိခဲ့သည်. ကျနော်တို့ငါ့ကိုယ်အားဖြင့်တစ်ဦး sagittal အချပ်မှာရှာဖွေနေခဲ့ကြ, လက်ျာဘက်သည်ငါ့ကျောရိုး၏အလယ်တွင်တဆင့်. ငါလုံး intervertebral disc တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်, တစ်အရည်ရွှမ်းနှင့်အတူအသီးအသီး, ဖြူဖပ်ဖြူရောမီးခိုးရောင်စင်တာ - ျာကနောက်ဆုံးမဟုတ်တဦးတည်းမှဆင်း. ဒီ disc ကို, L4 / 5, စတုတ္ထနှင့်ပဉ္စမ lumbar အရိုးအကြားမုသာစကားကို, အနက်ရောင်ခဲ့သည်. ဒါဟာအစ L4 ၏ခန္ဓာကိုယ်သို့တက်လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်ခဲ့, စတုတ္ထ lumbar ချပေး, ဒါကြောင့်အထက်. ထိုသို့ herniated ခဲ့သည် - ငါရှင်းလင်းစွာအနက်ရောင်တစ်ပူဖောင်းနောက်ကျောမှာအရိုးထက်ကျော်လွန်ထွက်တွန်းတွေ့မြင်နိုင်, အ lumbar အာရုံကြောအမြစ်များမှမသက်မသာနီးစပ်.
Iain အလွန်ကြင်နာခဲ့. ငါအတော်လေးဒီလောက်မျှော်လင့်ချက်ခဲ့. ငါနှစ်ပေါင်းအပေါ်နဲ့ off နာကျင်မှုနောက်ကျောဖူး. ကလေးများထားရှိခြင်း, ပြီးတော့ဆက်ဆက်သူတို့ကိုပတ်လည်မှာတင်ဆောင်လာသောကကူညီပေးခဲ့သေးပါဘူး. ငါမကောင်းတဲ့ပြန်ခဲ့သိထား. အခုတော့ငါကကိုမြင်လျှင်ခဲ့သည်.
အဆိုပါ scan ကငါ့ကျောငါ့ကိုပိုပြီးသတိထားစေတော်မူပြီ. ကိုယ့်ကြွက်သားအရင်ကဲ့သို့ကပယ်ချဖို့ထိန်း, တစ်နည်းနည်းနာကျင်ခဲ့ကြသောအရာတို့ကိုကျင့်ကိုကျင့်အပေါ်သယ်ဆောင်ရန်. ဒါကြောင့်ယခုငါပို်၌ငါ့နောက်ကျောတွန်းအားပေးမည်မဟုတ်. ငါမွငျ့မားသက်ရောက်မှုလေ့ကျင်းခန်းပြုပါမည်မဟုတ် - ငါငါ့ကျောနာကျင်သို့မဟုတ်ပါကပိုမိုဆိုးရွားအောင်မပါဘဲလုပျနိုငျအခြားလေ့ကျင့်ခန်းများများရှိပါတယ် - နှင့်, အချို့တွန့်ဆုတ်နှင့်အတူ, အစားမိမိအအိပ်ရာငါ့ကလေးငယ်ကိုသယ်ဆောင်နှင့်ညင်ညင်သာသာဆင်းသူ့ကိုမုသာစကားကို၏, ငါကိုယ်၌ကိုတက်ဖို့သူ့ကိုမေးမြန်း.
ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာင်, ဒီလုံးဝသမ္မတကတော် L4 /5disc ကို, မှင်-အနက်ရောင်အ MRI အပေါ်. ဒါဟာသမ္မတကတော်ဖြစ်မဘယ်တော့မှလိမ့်မည်. ကိုယ့်ကြောင့်နှင့်အတူအသက်ရှင်ရန်ရှိသည်. ဒါဟာငါ့အခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ built-in obsolescence ၏အစိတ်အပိုင်းရဲ့. ငါသည်ငါ၏အသက် 20 အရွယ်ရှိစဉ်အခါက, ငါဆေးပညာကိုလေ့လာခဲ့သော်လည်း, အစဉ်အမြဲငါတကယ်ငါ့ကိုယ်ကျရှုံးမယ်လို့မစဉ်းစားခဲ့ဘူး. ယခုငါသည်ငါ၏ 40 အတွက်ရယ်, ငါတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအဖြစ်မှန်ရင်ဆိုင်ဖို့ရန်ရှိသည် - ငါ, အခြားသူကလူတိုင်းနဲ့တူ, ဖြည်းဖြည်းချင်းပြိုကွဲနေပါတယ်. ငါကျဆင်းမှုနှုန်းကိုလျှော့ချဖို့လုပျနိုငျသောအရာတို့ကိုများများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကရပ်တန့်မနိုင်. အဖြစ်ဝေးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်သကဲ့သို့, ငါမှာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသောမရယ်. ငါလုံလောက်ရုံအကြောင်းကောင်းသောရယ်. ထိုအခါငါသေတတ်သောရယ်.
31335	0 Ageing, အဲလစ် Roberts သည်, အပိုဒ်, ဇီဝဗေဒ, ရှာဖှေတှေ့, အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပျက်ခြင်း, အင်္ဂါရပ်များ, လူ့ဇီဝဗေဒ, သိပ္ပံ, The New ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အဆိုပါ Observer
← အင်္ဂါဂြိုဟ်တစ်ခုမှာအနီရောင်ဂြိုဟ်ကိုလိုနီနိုင်သလား? Microsoft က Windows ကိုပူဇျောပါမညျ 10 အခမဲ့ဇူလိုင်လအတွက် →